अंग्रेजी किन सिक्ने र कसरी ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानबिना सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउनमात्र अंग्रेजी माध्यम बनाउनु फेरि अर्को शैक्षिक दुर्घटना निम्त्याउनु हो ।
माघ ३, २०७५ मधु राई
काठमाडौँ — ‘म्याम मलाई इङलिसमा’ ‘म्याम मलाई हिन्दीमा’ ‘म्याम मलाई नेपालीमै’ कक्षाकोठामा पस्ने बित्तिकै ‘नानीहरू पहिले कुन भाषामा कुरा गरुँ ?’ भनेर सोध्दा युकेजीका नानीबाबुहरूले प्राय:जसो यस्ता जवाफ दिने गर्छन् । कक्षा ‘वर्म अप’ गराउन पनि पालैपालो उनीहरूले चाहेको भाषामा एकछिन कुरा गरेपछि ‘हा..हा..’ गर्दै हाँस्छन् ।
अनि मात्र पाठभित्र पस्छु । यस्तै अंग्रेजी लगायत विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यममा पढाउँदा सकेसम्म नयाँ शब्दको परिचय उच्चारणसहित सेतोपाटीमा नेपालीमा शब्दार्थ लेखेर बुझाउने प्रयास गर्छु । अनि मात्र उनीहरूलाई पाठ बुझाउने थप अभ्यास गराउँछु । विज्ञान विषयको शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरेपछि केही हदसम्म सहज हुने अनुभव गर्दै आएकी छु ।
म जस्ता शिक्षक जसले स्कुले शिक्षा हासिल गर्दा २/३ भाषा सिक्ने अवसर पाएकालाई अन्य भाषा सहज भए पनि नेपाली वा अंग्रेजी माध्यममा स्कुले शिक्षा हासिल गरेकालाई त्यति सहज हुँदैन । सन् ६० र ७० को दशकमा भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको जलपाइगुडी जिल्लामा स्कुले शिक्षा हिन्दी र दार्जिलिङमा उच्चशिक्षा अंग्रेजी माध्यममा हासिल गर्ने म जस्ताले ४ वटा भाषा पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । प्राथमिकतहदेखि हिन्दी माध्यममा शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीले ऊबेला कक्षा ७ मा ऐच्छिक भाषा संस्कृत र बङ्गला भाषालाई तेस्रो भाषाको रूपमा अपनाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
आफू नेपालीभाषी भए पनि स्कुले शिक्षा आर्जन गर्ने पहाडे मूलका मजस्ता नेपाली विद्यार्थीले पहिलो भाषा हिन्दी, दोस्रो अंग्रेजी र तेस्रो भाषा बङ्गला पढ्नुपथ्र्यो । ऊबेला सिकेको भाषामध्ये अंग्रेजी भाषा आज जीविकोपार्जनको मेलोमात्र बनेको छैन, यसले अंग्रेजी भाषाको पत्रपत्रिका र पुस्तक पढ्न सहज बनाएको छ । हिन्दी र बङ्गला भाषा विद्यार्थीलाई एकछिन भए पनि मनोरञ्जन प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ भने हिन्दी र नेपालीको लिपि उस्तै भएकाले अखबारी लेखन यात्रालाई समेत सहज बनाएको छ, ऊबेलाको हिन्दी माध्यमले ।
विडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय नेपालमा अंग्रेजी माध्यममा स्कुले शिक्षा आर्जन गर्नु/गराउनु आवश्यकताभन्दा पनि बाध्यता बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयहरूले अंग्रेजी भाषालाई स्कुले शिक्षाको माध्यम बनाएपछि अंग्रेजी भाषाप्रतिको आकर्षण बढेको छ । तथापि निजी विद्यालयहरूको विगत र वर्तमान केलाउने हो भने यसले ५ थरीका विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएको प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो उत्कृष्टमा पर्नेहरू चिकित्सक, इञ्जिनियर र पाइलट ।
दोस्रो उत्कृष्टमा पर्नेहरू छात्रवृत्ति पाएर उतै विदेशिएका छन् भने तेस्रो ठूलो धनराशि खर्ची उच्चशिक्षा हासिल गर्ने भन्दै विदेशी भूमिमा अहोरात्र खट्न बाध्य छन् । चौथो थरीका नेपालमै उच्चशिक्षा हासिल गर्दागर्दै बीचमा छाडेका वा पुरा गरेकाहरू खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । पाँचौं थरीका कोही शिक्षण त कोही सानातिना व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । समग्रमा, निजी विद्यालयहरूले स्वदेशलाई भन्दा विकसित मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा शिक्षाका सरोकारवालहरूले त्यति धेरै अध्ययन, अनुसन्धान गरेको पाइँदैन ।
बितेको ३/४ दशकभित्र अंग्रेजी माध्यममा स्कुले शिक्षा आर्जन गरेका बहुसंख्यकको गन्तव्य विदेशी भूमि बन्दै गएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानविना सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउनमात्र अंग्रेजी माध्यम बनाउनु फेरि अर्को शैक्षिक दुर्घटना निम्त्याउनु हो । किनभने विगतमा निजी विद्यालय पढेका बहुसंख्यकले विदेशलाई गन्तव्य बनाएका छन् । भोलि सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा हासिल गर्नेहरूको गन्तव्य पनि विदेश नै हुने निश्चितप्राय: छ ।
अध्ययन, अनुसन्धानविना २०२८ सालपछि खुलेका बहुसंख्यक निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षाकोमाध्यम अंग्रेजी बनाएपछि उनीहरूले पलायनवादीशिक्षालाई महत्त्व दिंँदै आएको पाइन्छ । निजी विद्यालयपढेका बहुसंख्यक विद्यार्थीले स्कुले शिक्षा आर्जन गरिसक्दा‘मैले पाएको स्कुले शिक्षाले म र मेरो देशलाई काम लाग्ने के–के सिकायो त ?’ भनेर सोच्नुको सट्टा ‘नेपालमा त स्कोप नै छैन । अंग्रेजहरूकै देश जानुको विकल्प छैन’ भन्नेसोचको विकास गराउनुमा अंग्रेजी भाषाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।
कतिपय शिक्षाविद्ले ३ कक्षासम्म साना विद्यार्थीले नेपाली भाषा वा मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्दा सिकाइ प्रभावकारी र दिगो हुने औंल्याएका छन् । साना विद्यार्थी जसले नेपाली भाषामा दोहोरो कुरा गर्नसमेत सक्दैनन्, उनीहरूलाई अंग्रेजी भाषा सिकाउनु भनेको उसले चाहेको भाषामा शिक्षा हासिल गर्न पाउने अधिकार हनन गर्नु हो ।
अंग्रेजहरूलाई अंग्रेजी भाषाले व्यक्तित्व विकास गर्न र देशमै गरिखाने जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गरे पनि हामीकहाँ अंग्रेजी भाषाले विदेशिनमात्र प्रेरित गर्दैछ, चाहे त्यो उच्चशिक्षाको नाममा होस् वा रोजगार बन्न । अमेरिकी शिक्षक तथा शिक्षाविद जन हल्टका अनुसार स्कुले शिक्षाले विद्यार्थीलाई पहिले आफू र आफू हुर्कने समाजसँग परिचित गराउनु शिक्षाको पहिलो उद्देश्य हो भने आफू हुर्कने समाजमा कसरी बाँच्ने र प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न कसरी गर्ने भनेर सिकाउनु शिक्षाको दोस्रो मूल उद्देश्य हो ।
उनको यो भनाइ मनन गर्ने हो भने अहिले निजी विद्यालयमात्र होइन, हाम्रो समग्र स्कुले शिक्षा नै असफलताको बाटोमा हिँडिरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा अंग्रेजी भाषालाई स्कुले शिक्षाको माध्यम बनाउनु भनेको फेरि पलायनवादी शिक्षालाई मलजल गर्नु हो, जुन निजी विद्यालयले गर्दै आएको छ । यस अर्थमा १३/१४ वर्ष खर्चेर निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीका लागि अंग्रेजी भाषाले नत देशलाई चाहिने जनशक्ति बन्न प्रेरित गर्‍यो, न उनीहरूमा राष्ट्रभाव नै जगायो ।
निजी विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा प्रदान गर्दा विद्यार्थीलाई थप के–के सिकाउँदा विद्यार्थीले स्वदेशमै गरिखाने शिक्षा पाउँछन् र उनीहरूमा राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराउन के कस्तो क्रियाकलाप थप्ने हो भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ । किनभने शिक्षा चाहे निजी हुन् वा सामदायिक, माध्यम चाहे अंग्रेजी होस् या नेपाली बहुसंख्यकले जागिरमुखी शिक्षालाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ ।
यी दुवै खाले विद्यालयले अबका दिनमा जागिरमुखी शिक्षा होइन, जागिर दिनसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । जागिर दिनसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा अंग्रेजी भाषाले के कस्तो सहयोग गर्छ र गरिरहेको छ ? कुन भाषामा शिक्षा प्रदान गर्नेभन्दा पनि समाज र देशलाई विकास र समृद्धिको पथमा हिँडाउन के कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०७:३०
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ लाई रोक नलगाउन निर्देशन दिएका छन् ।
उनले यस्ता सेवालाई व्यवस्थापनको बाटो अपनाउन सकिने तर अहिले जे अवस्थामा छ, चलिरहेको छ, त्यस्तै छोडिदिन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीरमहासेठलाई निर्देश गरेका हुन् ।
मन्त्री महासेठकै निर्देशनअनुसार ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सेवामा रोक लगाएको थियो । तर यो सेवा रोकेकामा सर्वसाधारणबाट समेत सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री महासेठलाई यस्ता विषयहरूमा ‘ह्याभोक क्रिएट’ नगर्न भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार बुधबार साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा यातायातमन्त्री महासेठ पनि पुगेका थिए ।
त्यहीं प्रधानमन्त्रीले टुटल र पठाओको विषयमा मन्त्रीसँग कुरा गरेका थिए । उनले बैठकमा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूकै अगाडि बाहिर अनावश्यक ‘ह्याभोक’ सिर्जना हुने कुनै काम नगर्नुस् भने । कुनै मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति यात्रु हो कि परिवारको सदस्य हो कि त्यसको जाँच गर्ने के संयन्त्र छ ? भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई अहिले यथास्थितिमा राख्न निर्देश गरेको स्रोतले बताएको छ । यसअघि मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन रोक्ने लगायतका विषयमा पनि कुनै निर्णय नभईकन बाहिर गलत खालको हल्ला चलेको प्रसंग उठाएका थिए ।
टुटल र पठाओलाई रोकेपछि यसको बारेमा बरु व्यवस्थित नीति बन्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएको थियो । यसको सेवा लिइरहनेहरूले महँगो ट्याक्सी, सवारी जामका कारण झेल्नुपरिरहेको समस्यामा टुटल र पठाओ किफायती र सजिलो सेवा भन्दै व्यवस्थित बनाउन माग गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने टुटल र पठाओलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । रातो प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु ओसार्नु अवैधानिक हुने भएकाले कानुनी वैधता नपाएसम्म सञ्चालन गर्न नदिइने मन्त्रालयको तर्क थियो ।
‘सरकारलाई थाहा नदिई अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र चलाउनुपर्छ ।’ कुनै काम गर्नुअघि विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै उनले यातायात व्यवस्था विभागमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘यात्रुले सेवा पाएको भन्दैमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा बन्द गर भनेर यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशीको नक्कल गरेर अवैधानिक रूपमा चलाउन पाइँदैन ।’
ती कम्पनीले हालसम्म सरकारलाई झुक्याएर चलाएकाले प्रश्न उठेको बताए । सेवाका लागि मध्यस्थता गर्ने टुटल र पठाओको सेवामा ट्राफिक प्रहरीले सोमबारबाटै रोक लगाइसकेको छ । टुटलले दुई वर्षदेखि सेवा दिइरहेको छ भने पठाओ केही महिनाअघि सञ्चालनमा आएको हो । यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । टुटल र पठाओ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसार्न मिल्ने व्यवस्था कानुनमै नभएको ती अधिकारीले बताए । ‘यात्रु ओसार्न मिल्दैन, त्यसका लागि कानुन चाहिन्छ । अवैधानिक बाटो समात्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले टुटल र पठाओले सेवा राम्रो दिए पनि कानुनी रूपमा अवैधानिक भएको बताए ।
व्यवस्थित गर्न सेवाग्राहीको माग
काठमाडौं (कास)– पहिलोपल्ट एक महिनाअघि साथीभाइबाट सुनेपछि पुल्चोक बस्ने सिजन यादवले ‘टुटल एप’ डाउनलोड गरे । यस अवधिमा उनले ४ पल्ट यो एप प्रयोग उपत्यकाभित्र गरेर स:शुल्क मोटरसाइकल यात्रा गरे ।
‘मेरो व्यक्तिगत अनुभव भन्नुपर्दा निकै राम्रो रह्यो । अनुभवी चालक, राम्रो मोटरसाइकल, समयमा आउने र समयमै पुर्‍याउने गर्छ ।’ उनले कोटेश्वर, सोल्टी मोड, कलंकीलगायतका स्थानबाट पुल्चोक आउन टुटलको प्रयोग गरेका थिए ।
अर्को यस्तै एप ‘पठाओ’ बाट यात्रा गरेको अनुभव सुनाउँछन् नक्साल कार्यालय भएका सतिश सहनी । पहिलोपल्ट उनले पनि डेढ महिनाअघि यो एप प्रयोग गर्दै यात्रा गरे । ‘अफिसबाट ६ बजे बिदा पाइन्छ । ७ बजे जसरी पनि कलंकीमा गाडी चढ्नुपर्ने थियो,’ सहनीले भने, ‘सार्वजनिक यातायातमा गएको भए समयमा पुर्‍याउँदैनथ्यो । मैले उक्त एपमार्फत बाइक चालक बोलाउँदा मिनेटभित्रमा नक्साल पुगे र आधा घण्टामा कलंकी ल्याइपुर्‍याए ।’ उनले मोटरसाइकलको अवस्था, चालकको व्यवहार सबैमा सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिए । यो एपको अर्को सकारात्मक पक्षबारेउनले भने, ‘हाम्रो यात्रा कस्तो रह्यो भनेर फिडब्याक पनि लिने रहेछन् । त्यसले सेवा झन् गुणस्तरीय बनाउँछ ।’
यादव र सहनी मात्र होइनन्, यस्ता एप प्रयोगबाट सुविधा लिइरहेका जमातबाट यस्ता सेवाबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइन्छ । यादव यसको प्रयोग दोहोर्‍याउनुको कारणबारे थप्छन्, ‘यो टयाक्सीको तुलनामा निकै सस्तो पर्छ । टयाक्सी जस्तो बार्नेनिङ गरिरहनुपर्ने झन्झट हुन्न । कति दूरी हो र कति भाडा पर्छ भन्ने पनि एपबाटै सुरुमै थाहा हुन्छ, ठगिने कुरा हुन्न ।’
कोसँग जाँदै छु उसको मोटरसाइकल नम्बर, फोन सम्पर्क सबै एपबाटै थाहा हुन्छ । कुनै किसिमको डर नहुने, भरपर्दो यातायातको साधन भएको उनी बताउँछन् । जामको समस्याबाट मुक्ति पाइने उनकोभनाइ छ । छोटो र कम जाम हुने रुट हुँदै गन्तव्यमा पुग्न सकिने उनले बताए ।
हाल ट्राफिक प्रहरीले यस्ता भाडाका मोटरसाइकल चालकमाथि कारबाही गर्न थालेपछि प्रयोगकर्ता निराश भएका छन् । ललितपुर बस्दै आएकी ज्योति थापा बोगटी पनि ट्राफिक प्रहरीले हाल त्यस्ता मोटरसाइकल र चालकमाथि गरिरहेको कारबाहीलाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी रिङरोडबाहिर बस्छौं, पसल न्युरोडमा छ । बेलुका अबेर पसल बन्द गरेर आउँदा न त सार्वजनिक सवारी हुन्छ न त टयाक्सी ९ सयभन्दा कममा जान मान्छन् । यस्तोमा यो उपयुक्त सेवा हो ।’ मध्यमवर्गीय परिवारका लागि एक्लो जाँदा यो उपयुक्त साधन हुने उनी बताउँछिन् ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०७:२५